Home Parenting Child Nutrition ကလေးငယ်များအတွက် ပင်လယ်စာနှင့် သင်သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ
ပင်လယ်စာက ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင် B-6 နှင့် B-12၊ ဗီတာမင် D နှင့် အိုမီဂါ-၃ fatty acids တွေရဲ့ အရေးပါသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင့်ကလေးအတွက် ပင်လယ်စာကို မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီမှာ ကလေးတွေအတွက် ပင်လယ်စာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်း သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပင်လယ်စာဟာ ကလေးတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုအဆင့်တွေမှာ သင့်လျော်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝမှာ ဖျားနာခြင်း (သို့) နာတာရှည်ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော ပင်လယ်စာရွေးချယ်မှုတစ်ချို့ကတော့ တူနာ၊ ဆော်လမွန်နှင့် ထရောက်ငါးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် အစားအသောက်တွေနဲ့ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အစားအသောက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ပင်လယ်စာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ? ဒီပို့စ်မှာတော့ ပင်လယ်စာနဲ့ ပတ်သက်သော အရာအားလုံးကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငါးနှင့် တစ်ခြားပင်လယ်စာတွေကို ကလေးငယ်အစားစားတတ်ပြီးချိန် တစ်လ (သို့) နှစ်လအကြာမှာ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ချို့သော လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အစားအစာအုပ်စုထဲမှာ ပင်လယ်စာကို ထည့်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
၁။ မြင့်မားသော အဟာရဓာတ်များ ပါရှိခြင်း
အဆီများသော ငါးများနှင့် ပင်လယ်စာတွေဟာ အာဟာရဓာတ်မြင့်မားသောအစားအသောက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးစကလေးနှင့် ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်သာ ငါးစားသင့်ပါတယ်။ ငါးတွေမှာ ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုနည်းပြီး ဗီတာမင် D၊ ပရိုတင်းနှင့် ဗီတာမင် B Complex ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ အိုမီဂါ – ၃ Fatty Acids
ပင်လယ်စာများတွင်ပါရှိသော အိုမီဂါ – ၃ ဖက်တီအက်ဆစ်မြင့်မားမှုက သင့်ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ခုခံအားနှင့် အမြင်အာရုံကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ Salmon ငါးဟာ အိုမီဂါ – ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော DHA ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အရေပြားပြဿနာတစ်ချို့ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
Archives of Disease in Childhood မှ ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ငါးစားသော တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ နှင်းခူးကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
သင့်ကလေးက ပင်လယ်စာ ဘယ်လောက်အထိ စားသင့်လဲ?
အသက် ၉ လမှ ၁၂လကြား ကလေးငယ်တွေအတွက် အရိုးမပါသောငါးအသားကို စားပွဲတင်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းမှ သုံးဇွန်းအထိ အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးများနှင့် ပင်လယ်စာ – အန္တရာယ်များ
အံ့ဩဖွယ်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော ပင်လယ်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ကလေးအတွက် အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော ပင်လယ်စာတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အာရုံကြောစနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သော ပြဒါးနှင့် PCBs ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးများအတွက် လုံခြုံမှုပေးနိုင်သော ပင်လယ်စာများ
သင့်ကလေးအတွက် ဘေးကင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သော ငါးအမျိုးအစားတစ်ချို့နှင့် ပင်လယ်စာများဖြစ်ပါတယ်။
Herring (မြောက်အတ္တလန္တတိတ် ငါးသလောက်တစ်မျိုး)
ဖော်ပြပါငါးများသည် အစာကြေလွယ်ပြီး ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ခဲ(နည်းပါးသော)သော ငါးအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာက သင့်ကလေးအတွက် ကောင်းမွန်တာမှန်ပေမယ့် သင့်ကလေးရှောင်ဖို့ လိုအပ်သော အမျိုးအစားတစ်ချို့လည်းရှိပါတယ်။
King mackerel (ငါးကွမ်းရှပ်)
ဒီအချက်တွေကတော့ ပင်လယ်စာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ အလုံခြုံဆုံးနည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပြချက်တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစိမ်း (သို့) မချက်ပြုတ်ရသေးသော ပင်လယ်စာများတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများ ပါဝင်ပြီး အော့အန်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသော အညစ်အကြေးတွေက ပင်လယ်စာတွေမှာဆိုရင် အဆီနှင့် အရေပြားမှာ စုပုံနေတတ်တာကြောင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီ ၎င်းနေရာတွေကို ဖြတ်တောက်ပါ။
ဖုတ်ခြင်း၊ ပြုတ်ခြင်း၊ ကင်ခြင်းက အညစ်အကြေးနှင့် အဆီတွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ ငါးမှ အရိုးများကို သေချာဖယ်ရှားပါ။ တစ်ချို့သော ငါးတွေမှာ အရိုးသေးသေးလေးတွေ ပါတတ်တာကြောင့် အရိုးထုတ်တဲ့အခါ သတိထားပါ။ သင့်ကလေးနှစ်သက်သော အသီးအရွက်များနှင့် ပင်လယ်စာများကို ရောစပ်နိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်စာတွေဟာ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားတာကြောင့် သင့်ကလေးက ဓာတ်မတည့်ဖြစ်လာပါက ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာဓာတ်မတည့်ခြင်းက ပုံမှန်အားဖြင့် အစာစားပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း (သို့) မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စတင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်မှာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြလာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီအမြန်ခေါ်သွားပါ။
နီမြန်ပြီး အနီဖုအသေးလေးများ ထွက်လာခြင်း
အသက်ရှူကြပ်ခြင်းနှင့် ရင်ကြပ်ခြင်းအခြေအနေတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအတွက် ပင်လယ်စာဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ မျှတသော အစားအစာအတွက် အာဟာရဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာတွေအပြင် ဗီတာမင်နှင့် အိုမီဂါ – ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ရင်သွေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ စားသောက်နိုင်စေဖို့ သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် အကြံပြုထားသော ပင်လယ်စာစားသုံးနိုင်မှုပမာဏတွေကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။ ဘေးကင်းစွာ ချက်ပြုတ်နည်းတွေကို လေ့လာပါ။ ပင်လယ်စာကျွေးပြီး ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာတွေကို သတိထားပါ။ တစ်ခုခုမှားယွင်းလာတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းသွားတွေ့ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
Previous articleသင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို မတော်တဆ အရှက်ရစေမယ့် နည်းလမ်း (၅)ခု
Next articleတစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့် မှတ်တိုင်များ